Sky Net ထံမှ အကျိုးအမြတ်ဝေစု တိုးတောင်းမည်ဟု ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာနဆို
ပို့စ်တင်ချိန် - 5/31/2014 08:06:00 PM
နေပြည်တော်၊ မေ ၃၀
သုံးဆယ်သုံးနှစ်ကြာ ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ခွင့် သဘောတူစာချုပ်တွင် အစိုးရ၏ အကျိုးအမြတ်ဝေစု နည်းလွန်းသည်ဟု ဝေဖန်ခံနေရသော ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာနက Sky Net (ရွှေသံလွင်မီဒီယာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်) နှင့် ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်ကို ပြန်ပြင်၍ အကျိုးအမြတ် ဝေစုကို ထပ်တိုး တောင်းခံမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးတင့်ဆွေက ပြောကြားသည်။
နေပြည်တော် ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန အဆောက်အအုံ၌ မေလ ၃၀ ရက်နေ့က ပြုလုပ်သော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ၎င်းက အထက်ပါအတိုင်း ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
“ဆတိုးနဲ့ တောင်းသွားမှာပါ။ အဲ့ဒီအတွက် ပြင်ချုပ်မယ့် စာချုပ်မူကြမ်းကို ဇွန်လမှာ ရှေ့နေချုပ်ရုံးကို ပို့ပြီး အစိုးရအဖွဲ့အထိ အဆင့်ဆင့် တင်ပြအတည်ပြုဖို့ လုပ်နေပါတယ်” ဟု ဦးတင့်ဆွေက ဆိုသည်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လအတွင်း ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ရွှေသံလွင် ကုမ္ပဏီတို့ ရုပ်သံ ထုတ်လွှင့်ခွင့်ဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ရာတွင် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ၃၃ နှစ်အထိ ခွင့်ပြုထားခြင်း၊ ပထမသုံးနှစ်တွင် အကျိုးအမြတ် ခွဲဝေပေးရန် မလိုကြောင်း ခွင့်ပြုထားခြင်း၊ အကျိုးအမြတ် ခွဲဝေရာတွင်လည်း ၄ ရာခိုင်နှုန်းမှ စတင် ကောက်ခံ၍ ငါးနှစ်တစ်ကြိမ် ၄ ရာခိုင်နှုန်းသာ ထပ်မံတိုးမြှင့် တောင်းခံရန် သဘောတူထားခြင်းတို့ကြောင့် အဆိုပါစာချုပ်ကို ဝေဖန်နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ယင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မူလ သဘောတူစာချုပ်ကို ခေတ်ကာလနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်စေရန် ပြန်လည်ပြင်ဆင် ချုပ်ဆိုမည် ဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီကလည်း သဘောတူထားကြောင်း၊ ပြင်ဆင်မည့် စာချုပ်တွင် နိုင်ငံတော်အတွက် အကျိုးအမြတ် ဝေစုကို သေချာပေါက် တိုးမြှင့် တောင်းခံမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာနက ပြောဆိုသည်။
ရွှေသံလွင် ကုမ္ပဏီကမူ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ချုပ်ဆိုသော သဘောတူစာချုပ်တွင် အကျိုးအမြတ် ခွဲဝေမှု ကိစ္စရပ်မှာ ကုမ္ပဏီ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏနှင့် သက်ဆိုင်ကြောင်း၊ ရုပ်သံကြော်ငြာခမှာလည်း မီဒီယာအချို့တွင် ရေးသား ဖော်ပြနေသကဲ့သို့ အများအပြား မရရှိကြောင်း ထုတ်ပြန် ရှင်းလင်းသည်။
ပုဂ္ဂလိက ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ခွင့်ကို ရွှေသံလွှင်နှင့် Forever ကုမ္ပဏီ နှစ်ခုကသာ ရရှိထားသဖြင့် ရုပ်သံကြည့်ရှုသူ အများပြည်သူတွင် ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် မရှိကြောင်း၊ ဈေးနှုန်း သတ်မှတ်ချက် ကြီးမြင့်မှုကြောင့် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တက်ရောက်သူများက ထောက်ပြသော်လည်း ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ခွင့်ကို ထပ်မံခွင့်ပြုရန် မရှိကြောင်းသာ ဦးတင့်ဆွေက ပြောဆိုသည်။
ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ပြောဆိုချက်အရ ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ခွင့် လိုင်စင်များ ထပ်မံခွင့်ပြုရန် ရုပ်သံ ထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ် အတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန် လိုအပ်ပြီး အဆိုပါ ဥပဒေကြမ်းမှာ အမျိုးသားလွှတ်တော်သို့ ဆွေးနွေးရန် ရောက်ရှိပြီး ဖြစ်ကြောင်း ယင်းဝန်ကြီးဌာနထံမှ သိရသည်။
ပုသိမ် ၈၈မျိုးဆက် ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကို ဗီဒီယိုရို...
သတင်းတိုများ - Breaking News
မန္တလေး အောင်မြေသာစံမြို့နယ် ဂက်(စ်) မီးခြစ်စက်ရုံအ...
နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကတဆင့် အခြေခံဥပဒေပြင်ဖို့ သမ္မ...
ငွေ သိန်း ၁၀၀ ကောက်ရသော်လည်း အသက်အန္တရာယ်ကြားက ပိုင...
Contraceptive pills ဟော်မုန်း ၂ မျိုးပါကိုယ်ဝန်တားဆေး
စိတ္တဇ ဆေးရုံတစ်ခုတွင် - ဟာသ
မလိုပါဘူး - ဟာသ
Meeting New People - အင်္ဂလိပ်စာ
Contraceptive pills ကိုယ်ဝန်တားဆေးရဲ့ အကောင်း-အဆိုး
အဖြစ်များသော ကျန်းမာရေးပြဿနာများနှင့် ဖြေရှင်းနည်း...
နားလည်မှု့.. လွဲခြင်း - ဟာသ
ရန်ကုန် - မန္တလေး အမြန်လမ်းကို အင်ဂျင်နီယာရှုထောင့်...
ယနေ့မှစ၍ ရန်ကုန်ရှိ မြို့နယ်အချို့ မီးပြတ်မည်
တူရကီတွင် အပိတ် ခံထားရသောYouTube ပြန်သုံးနိုင်ပြီ
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်စာရင်း ကြေညာမည့်ရက် ယခုရက်ပို...
မုံရွာအကျဉ်းထောင်မှ အကျဉ်းသားတစ်ဦး ထောင်လွတ်ပြီး ...
Sky Net ထံမှ အကျိုးအမြတ်ဝေစု တိုးတောင်းမည်ဟု ပြန်ြ...
အတုယူစရာ စင်ကာပူက လူမျိုးဘာသာကွဲပြားမှု
စည်းကမ်းမဲ့ ယာဉ်များကို ယာဉ်ထိန်း Facebook စာမျက်န...
တန်ရာတန်ကြေး - ဟာသ
ဈေးသည်နှင့်ဈေးဆစ်သူ - ဟာသ
တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြဿ နာတွေ ဖြေရှင်းပြီးရင် စစ်တပ်က တပ...
ကမ္ဘာ့ဖလား အုပ်စု(ဃ) သုံးသပ်ချက်
နိုင်ငံတကာရှိ ဒုက္ခ ရောက်နေသော မြန်မာများ နေရပ်ပြန်...
ဒေသတွင်း သြဇာကြီးနိုင်ငံ တနိုင်ငံ မြန်မာဖြစ်ဖို့ က...
၃၀ရက်၊ ၅လ၊ ၂၀၁၄ခုနှစ် သတင်းထူးများ
ခရစ်ယာန်အမျိုးသားနှင့် လက်ထပ်မိ၍ သေဒဏ်ချမှတ်ခံရသူ ...
ငွေတန်ခိုး - ဟာသ
ရေအောက်မှာ တည်ဆောက် ထားတဲ့ ဟိုတယ်
တာမွေ ဗလီထိပ်အနီး ၁၀ တန်းကျောင်းသား ရွှေထည်နှင့် လက...
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက် မဟာပဋ္ဌာန်း ...
အောင်မြင်နိုင်ဖို့ ခရုလို လုံ့လ ရှိရန်လို
မိဘဆွေမျိုးများ ဆန္ဒကို ဆန့်ကျင်သည့် အမျိုးသမီးအား ...
ဆိတ်ကို ကျောကုန်းပေါ်တင်ပြီး စက်ဘီးစီးခဲ့သူ (ရုပ်သံ)
အသက် (၁၁၃) နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီးနဲ့ အသက် (၇၀) နှစ်...
ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ချန်ပီယံဖြစ်နိုင်တဲ့အသင်း ၆ သင်းပဲ ရှ...
အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး သမ္မတရဲ့ သဘောထားကို လစဉ်ရေဒီယ...
ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်တွင် ရွှေမျှောတိုက်ရာမှ မြေပြိုကျသြ...
ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး လက်မှတ် (၂)ရက် အတွင်း (၃) သိန...
စကိုင်းနက်ရုပ်သံနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော်ဘက်မှ နစ်န...
အော်ရီဒူးနှင့် တယ်လီနောကို ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် မြန်...
ဆီးရီယားတွင် အသေခံဗုံးခွဲသူတဦးဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံသ...
အပါးလွှာဆုံးဖုန်း Huawei Ascend P7 ကျပ်လေးသိန်းနီးပ...
မန္တလေးတွင် တရုတ်နိုင်ငံသား ၄၀ ကျော် ပြည်နှင်ဒဏ်ပေး
Apple iOS 8 Banner လွှင့်တင်နေပြီ။
နဂို ရရှိနေတဲ့ ၀ိုင်ဖိုင်ထက် ဆယ်ဆ ပိုမြန်တဲ့ Huawe...
၃ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးအား မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့ကြောင်း သံသ...
အာဆီယံအမျိုးသမီး အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဖိုရမ်တွင် မျို...
ကြက်ဥကြော်ရာမှ နေအိမ်(၂ဝ)လုံး မီးကူးဆက်လောင်
ပြည်တွင်းငါး ပြည်ပပို့ဈေးထက် ပိုပေးကာ စားသုံးနေရ
မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြား တိုက်ပွ...
နှစ်ဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေပဲ ဆွေးနွေးနေလို့ငြိမ်း...
Taxi Driver ဦးလေးကြီး..သူသရဲခြောက်ခံရတဲ့အကြောင်း(က...
ပုဒ်မ ၄၃၆ ဆိုတာ ဘာလဲ။ ဘာကြောင့် ဘယ်လို ပြင်ချင်တာလ...
အမျိုးသမီးတဦးဧရာဝတီဘဏ်မှ ငွေကျပ် သိန်း ၅၀ ပိုထုတ်...
တရားရုံးသို့ ချုပ်မိန့်ရီမန် သွားရောက်တောင်းခံရာမှ...
ကာတာလန်မှာ မက်ဆီလို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ ခွေးနဲ့ ကြောင်...
ဒေတာအဟောင်းတွေ ပယ်ဖျက်ခွင့် ဂူဂဲလ် ပေးမယ်
ထိုင်း နိုင်ငံရေး လမ်းပြမြေပုံ ကြေညာ
ဗိုလ်တထောင် BOAD ဝင်းထဲကမြေတွေကို မူလပိုင်ရှင်ဆီပြ...
လွှတ်တော်မှာလည်း အတိုက်အခံ အဖြစ် ရပ်တည်ဆဲလို့ ဒေါ်အေ...
ပုဒ်မ ၄၃၆ မပြင်ဆင်ရေး လက်ကမ်းစာစောင်တွေ မန္တလေးမှာ ...
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း နိုင်ငံသားအမည်ခံ၍ စီးပွားရေးလုပ...
အမေရိကန်အစိုးရကျောင်းများသို့ မက်ဇူကာဘက်နှင့်ဇနီး ...
အွန်လိုင်းကနေဈေးဝယ်တာ စတိုင်လ်ကျရဲ့လား၊ စမတ်ကျရဲ့လား
သင် စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ပေါ်လွင်စေတဲ့ လက္ခဏာများ
ထိုင်းရောက်မြန်မာများ ဗီဇာသက်တမ်းတိုးခ နှစ်ဆပေးနေရ
နတ်တလင်းမြို့တွင် နေအိမ်လေးလုံးဖျက်ဆီးခံရမှု ကျပ် ၇...
မုဒိမ်းကောင်ရဲ့ချစ်သူ မိန်းမလျာကိုချစ်မိ၍ သူမထိန်း...
ဓားကိုင် တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ သားကို သေဒဏ် ချမှတ်ဖို့ ...
မော်တော်ကား စလစ်ဈေး နှစ်ရက်အတွင်း ငါးသိန်း မြင့်တက်
လိင်ဆွဲဆောင်မှုပြင်းထန်နေတဲ့အတွက် Eva Green ရဲ့ Si...
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် ကြွက်များ အစုလိုက် အပြုံလိ...
၂၀၃၅ ခုနှစ်မှာ အင်္ဂါဂြိုလ်ပေါ် လူတွေ ခြေချဖို့ ရည်မှ...
ပျမ်းမျှ တစ်လ ကျပ်သိန်းပေါင်း ၅၀၀၀၀ ကျော် ၀င်ငွေရှ...